Zoro Ezo Fancy Zoro Ezo Nkata Nkata - Viga Faucet Emeputa
Home K ere Kachasị Akpụkpọ Ahịa Kachasị mma Zoro Ezo Zoro Ezo Mara Mma Fulo
Zoro Ezo Zoro Ezo Mara Mma Fulo
Ihe: zinc alloy shei + oche katrized oche
Nye onye na - enweghị nku, nke a dị ka isi nri kichin mara mma na nke pere mpe. Mana anya gị zụrụ azụ ma ị nwere ike ịhụ ezigbo uru dị na ntanetị VIGA a na-ewu ewu ma ga-enwerịrị. Mara mma na -akpọ ma na-agagharị, otu ụzọ kacha mma isi banye mmiri a bụ na ọ bụ aghụghọ na-agbadata. Ọ bụrụ na mgbapụta mgbapụta dị n'olu faucet ahụ, ọ ga-agbadata ma nyefe tube na-agbanwe agbanwe ma na-emesapụ aka nke na-enye ndị ọrụ ohere iduzi mmiri ahụ dịka ha hụrụ.
Ugbo mmiri a VIGA na-eji otu lever na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ yana ike ya, ihe ọhụụ ga - enwerịrị maka ndị na - azụ ahịa na ụlọ ahịa azụmaahịa gị. Emebere site na ihe dị elu ma zuo oke tupu ọ ruo n'ụlọ nkwakọba ihe gị, anyị bụ ndị kachasị n'etiti ndị na-emepụta kichin kichin na-atụ anya igosi gị na ndị ahịa gị na ị nwere ike ịtụkwasị obi na ụlọ ọrụ fufet gị na-enye gị ịdị mma, nkasi obi na oge ịchọrọ. niile n'otu otu friji kichin dị mfe, dị ka nke a.
• mma kachasị mma sitere na ndị na-emepụta pọmpụ China
• Ezubere maka kichin ọgbara ọhụrụ nwere mkpa ọkaibe
• mma kacha mma nwere mkpado ọnụahịa dị mma
Mbụ: Ugboro abuo weputara faucet kichin na Chrome na ojii
Next: Kachasị mma na-akụda nri kichin
Kwesịrị Ekwesịrị Chrome-Plated Down Kitchen Faucet
Kachasị mma na-akụda nri kichin
Ugboro abuo weputara faucet kichin na Chrome na ojii